“Mourinho wuxuu sabab buuxda u ahaa colaada Real Madrid iyo Barcelona” – Iniesta oo weerar culus ku qaaday tababare Jose – Gool FM
“Mourinho wuxuu sabab buuxda u ahaa colaada Real Madrid iyo Barcelona” – Iniesta oo weerar culus ku qaaday tababare Jose
(La Liga) 26 Nof 2018. Halyayga kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa wuxuu xaqiijiyay in macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho uu sabab buuxa u ahaa nacaybka u dhexeeyay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
34 jirka reer Spain ayaa sheegay in Jose Mourinho uu mas’uul ka ahaa dhibaatada iyo nacaybka u dhexeeyay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona intii uu ku sugnaa caasimadda Spain ee Madrid, taasoo xitaa dhibaato weyn ku abuurtay xulka qaranka Spain iyo xiriirka ciyaartoytda.
Andres Iniesta ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu ku sheegay: “Xaaladdu aad ayay adkayd marka la ciyaarayo kulamada El Clásico inta uu Jose Mourinho ku sugnaa kooxda Real Madrid”.
“Xaalada iyo xiisaha u dhexeeyay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona uu sababay Jose Mourinho, wuxuun abuuray naceyb daran ay xitaa ciyaartoyda isugu muujinayeen gudaha garoonka”.
“Sidoo kale wuxuu saameyn ku yeeshay dheeli tirnaanta kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, waxay sidoo kale dhibaateesay xulka qaranka Spain, waxaana sii xoogeestay nacaybka taagnaa xiligaas, waxaana jirtay xaalad niyad jab ah”.
si kastaba Jose Mourinho ayaa wuxuu tababare ka ahaa kooxda Real Madrid seddex xilli ciyaareed, waana inta u dhaxeesay 2010 ilaa 2013, waxaana xiliyadaas lagu daawan jiray kulamada El Clásico murun xoogan iyo nacayb badan ay isku muujiyeen xidigaha ku kala sugnaa labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona.
Tababare Jurgen Klopp oo niyad jab ku riday jamaahiirta kooxda Liverpool